Kodzero-dzevanhu, 25 Gunyana 2017
Muvhuro 25 Gunyana 2017
Gunyana 25, 2017
Masangano Opesana Pamusoro peHonzeri yeChipatapata kuZvitoro
Kupesana uku kwabuda pakati peConfederation of Zimbabwe Industries, CZI,pamwe nesangano re Oil Expressers Association of Zimbabwe, masangano maviri aya achipa muonero wakasiyana.
Peturu Yonetsa Kuwana Zvakare muZimbabwe
Apo munyika mave kutanga kuita mitsetse yekutenga mafuta emotokari ukuwo zvimwe zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva zvave kutanga kushaikwa muzvitoro, vamwe vanoti gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe, VaJohn Mangudya, vanofanirwa kusiya basa nekuti vakundikana.
Gomarara reProstate Cancer Rokura Munyika
Imwe nyanzvi muHarare, VaAllen Chiura, vanoti rimwe dambudziko guru munyaya dzegomarara iri nderekuti hapasati pave neruzivo rwakakwana kuti gomarara iri rinokonzerwa nei.
MDC-T Inoti ZEC Iri Kuramba Kubuda paChena Pane Dura reVavhoti
Sangano reZimbabwe Electoral Commission range riri muBulawayo nemusi weMuvhuro umo riri kuita musangano wemazuva maviri nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende vachizeya nezvekugadzirira sarudzo dzegore rinouya.
Pastor Mawarire Vomiswa Mudare raMajisitireti neChipiri
Vari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende nepamusana pekunetsa kwave kuita mafuta edzimotokari nekushayikwa kwezvinhu muzvitoro pamwe nekushayikwa kwemari mumabhanga.
ARTUZ neZHDA Dzoronga Kusvitsa Nyunyuto Pamusoro peMihoro kuHurumende
Vana chiremba vari musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vari kurongawo kuendesawo gwaro renyunyuto kumakurukota ezvepfumi, hutano, pamwe nekubhodhi rinoona nezvehutano reHealth Services Board.
ZEC Inoti Ine Sevha Inochetengerwa Zvaiswa muBRV
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, ZEC, Amai Rita Makarau, vanoti ‘server’, kana kuti dura rinochengeterwa zvinenge zvaiswa mumichina yeBiometric Voters’ Registration Kit inoshandiswa mukunyoresa vavhoti, riri kumuzinda wesangano iri muHarare.
VaMasiyiwa Votaura Pamusoro peKushanduka kweMamiriro eKunze
Vachitaura pamusangano wezuva rimwe chete wavana muzvinabhizimusi wakarongwa nekambani yeBloomberg muNew York svondo rino, VaMasiyiwa vakati vakazvionera pachavo kuvhiringwa kwakaitwa madzimai ekuMali kuburikidza nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Muzinda weAmerica Wotaura Pamusoro peMashoko aVaMugabe kuUNGA
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakare vari nhengo yeparamende inomirira Makonde, VaKindness Paradza, varumbidza VaMugabe vachiti ndivo vega vane zvivindi zvekuudza mutungamiriri weAmerica kuti asiyane nenyaya yekuvhunditsira dzimwe nyika.
Vamwe Voshora Zvimwe Zvakataurwa naVaMugabe kuUNGA
Vanorwira kodzero dzevanhu mu Zimbabwe vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika Va Robert Mugabe ku United Nations musi wezuva rekucherechedza runyararo pasi pose anoratidza kusanzwisisa uye anoburisa pachena kuti VaMugabe havana hanya nekushungurudza vanhu mu Zimbabwe kwavari kuita.
MDC-T Yoparura Hurongwa hweKupinda Muvanhu Ichitsvaga Rutsigiro
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, vanoti bato ravo rakatora nzira yekutsvaga rutsigiro nayo iyi sezvo rakaona kuti kazhinji parinoita misangano vatsigiri varo vanosara vachishungurudzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve Zanu PF.